Kedu ihe dị na ya? Ebee ka ọ dị? Kedu? Atụmatụ Azụmaahịa weebụ | Martech Zone
Mgbe ị ga-emepe ụlọ ahịa, ị na-ekpebi ebe ị ga-etinye ụlọ ahịa ahụ, ihe ị ga-etinye n'ụlọ ahịa ahụ, yana kedu ka ị ga-esi mee ka ndị mmadụ banye ya. Imepe webusaiti, n’agbanyeghi ma o bu oruru ahia ahia, choro uzo di otua:
Kedu ihe ga-abụ na weebụsaịtị gị?
Ebee ka weebụsaịtị gị ga-adị?
Kedụ ka ndị mmadụ ga-esi chọta ya?
Olee otú ị ga-esi debe ha?
Kedu ihe ga-adị na weebụsaịtị gị?
Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, enwere igodo abụọ maka ịchekwa ụlọ ahịa. Otutu ndi mmadu na etinye uche na ihe kachasi mkpa, ihe ndi mmadu na-azuta. Nke abụọ abughi ihe doro anya. Ọ bụ ihe ndị mmadụ na-ekwu maka ya. Ihe atụ? Ana m agakarị ụlọ ahịa kọfị dị n’ógbè anyị. Ha nwere ihe ọ bụla onye kọfị hụrụ n'anya chọrọ - ebe izu ike, ezigbo ndị ọrụ, ezigbo mmadụ na ezigbo nri.
Lọ kọfị na-enye ihe ndị ọzọ, n'agbanyeghị, ndị mmadụ na-ekwu maka ya. Ha na-enye egwu dị ndụ na Fraịde na Satọde. Ha nwere ọmarịcha ihe osise na mgbidi ọ bụla ndị ọbịa nwere ike ịzụta. Ha nwekwara otutu ụlọ maka otu dị iche iche iji gaa ma zute - yabụ na ha na-enwe nzukọ nke Azụmaahịa, ndị mmiri ozuzo, ndị otu ụka, Poetry night, wdg.
Coffeelọ ahịa kọfị na-eme nke ọma! Kọfị naanị ga-eme ka azụmaahịa ha nwere - mana na-enweghị mmefu ego maka mgbasa ozi, ọ bụ ihe ndị ọzọ na - enyere aka inweta ndị ahịa ọhụụ. Ọ bụ ya mere azụmahịa ahụ ji aga n'ihu na-eto mgbe otu afọ gasịrị.
Ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ike ịnwe ọdịnaya dị ukwuu, dịka ụlọ ahịa kọfị na-eme kọfị mara mma. Ma nke ahụ apụtaghị na onye ọ bụla na-abịa! E nwere ọtụtụ usoro iji nyere aka bulie azụmaahịa gị ịkwesịrị iji:
Chọta ụzọ ndị ọzọ nke imepụta okwu ọnụ ahịa… ịza ajụjụ na saịtị ndị ọzọ, malitere ịrịa okwu ihu ọha, kaadị azụmahịa blog, na-ekere òkè na netwọk mmekọrịta, -elekọta mmadụ ibe edokọbara, na-ejikọ saịtị ndị ọzọ (obe-nkwalite).
Ebee ka saịtị gị dị? Olee otú ọ dị? Kedu ka ndị mmadụ si achọta ya?
Mgbe ị na-emepe ụlọ ahịa, ihe ikpeazụ ị ga-eme bụ iwu kilomita ole na ole site n'okporo ụzọ ma mepee ụlọ obibi crappy. Ikwesiri idobe ụlọ ahịa ebe ndị mmadụ na-atụ anya ka ọ bụrụ na ebe ndị mmadụ nwere ike ịchọta ya.
Alsochọrọ imeghe ụlọ ahịa dị mma na nke ndị mmadụ chọrọ ịlaghachi. Enwere ụlọ ahịa kọmputa dị n’okporo ụzọ si n’aka m nke m jere na-agabeghị ma abanye n’ime ya. Ime dị ka ebe nchekwa nchekwa nwere akụrụngwa agbasasịrị ebe niile. Ma mgbe m na-abanye n'ime Best Buy, enweghị m ike ịnyere aka ma na-agbagharị na mgbidi nke obere telivishọn oge ọ bụla. Ọ na-amasị m ịga leta Best Buy dị ka ọ masịrị m ịzụ ahịa ebe ahụ n'ihi aesthetics ya.
Gị nleta mbụ gị ụlọ ahịa kọfị na ị maara na ịnọghị na Starbucks. E nwere agba dị iche iche, ọtụtụ ihe osise, na ọdụ ndị barista na-eche ndị nche ihu ka ha na-abata. Stationlọ ọrụ ahụ dịkwa nso site n'ọnụ ụzọ ụlọ, yabụ ndị folks nwere oge iji hụ onye nọ na ụlọ ahịa ahụ wee kpebie usoro ha. Ọ bụghị a ndepụta mmepụta ụlọ ahịa emere ka ị banye ma pụọ.
E nwere usoro ole na ole maka ebe nrụọrụ gị yana nhazi nke ị kwesịrị ichebara echiche.
Mepụta na itinye usoro nyocha injinị ka ndị mmadụ nwee ike ịchọta saịtị gị. Nke a apụtaghị ịkwụ ụgwọ site na mgbasa ozi ọ bụla - mana ọ pụtara ịdenye saịtị gị na ya search Engines, na-etinye a robots.txt faịlụ iji webata bots ọchụchọ na iji ọrụ Sitemaps inye a igodo nsoro maka search engines ka ịnyagharịa gị na saịtị ahụ na, ịgwa ndị search engines mgbe ị na-eme mgbanwe, na ide search engine enyi na enyi ọdịnaya.
Họrọ nnukwu ngalaba aha. Nke ahụ bụ ngalaba nke dị mfe maka ndị mmadụ icheta, mgbakwunye .com (ka dị mkpa taa), na enweghị mgbochi ọ bụla. Ndị mmadụ ga-echeta yourstore.com, mana ha agaghị echeta bots-r-us.info. Oge ụfọdụ ngalaba kachasị mma bụ mkpụrụokwu ị na-achọ. Otu ihe atụ: blọọgụ m ga-eme nke ọma na SEO ọkwa ma ọ bụrụ na ngalaba aha ya 'ahịa' ma ọ bụ 'teknụzụ' dị na ya.
Aesthetics nke saịtị. Nhazi na isiokwu nke saịtị gị kwesịrị igosipụta ọkachamara na omume ịchọrọ igosi. Ekwuru m na ịghara iche banyere nke a - ọ bụ maka ọdịnaya. Enwetaghị m ya. Nnukwu saịtị na-ahụ uru na okporo ụzọ na a ọhụrụ imewe. Chọrọ imeghe Weebụ 2.0 saịtị? Gbaa mbọ hụ na ọ dị yiri saịtị Weebụ 2.0!
Kedu otu esi edebe ndị mmadụ na saịtị gị wee laghachi?
Named kpọrọ ya nke ọma, ị nwere ezigbo ngwa ahịa, ị gwala ndị mmadụ it ha na-amalite ịbịa mana kedu ka ị ga-esi debe ha? Ọ bụrụ na ịnweghị ọdịnaya na atụmatụ zuru oke iji mee ka ndị mmadụ lọghachi, ị ga-eji oge gị niile chọta ndị ọbịa ọhụụ kama ịchekwa ndị ị nwere.
Nnukwu ọdịnaya na-akpali akpali nke ahụ masịrị ndị na - agụ akwụkwọ gị ga - eme ka ha laghachite azụ.
Ndi saịtị gi nwere RSS ndepụta? RSS abụghị naanị ụfọdụ teknụzụ dị jụụ, ọ bụ atụmatụ njigide mara mma. Ọbụna ma ọ bụrụ na mmadụ abịabeghị na saịtị gị ruo nwa oge, ha nwere ike sụọ ngọngọ na nri ha site n'oge ruo n'oge - ikekwe mgbe ị na-enye ha ihe ha na-achọ!
Ebe nrụọrụ gị nwere nhọrọ ịdenye aha Email? Ọzọkwa, nke a bụ nnukwu ngwaọrụ njigide, na-agwa ndị mmadụ nwere mmasị ma ọ bụ ndị ahịa gosipụtarala mmasị (site na ịbanye na email gị).
Enwere ndị ọzọ. Eji m ezi okwu mee Prada ebe a n'ihi na achọtara m isiokwu na ụlọ ahịa Prada n'etiti enweghị ebe… Echere m na ọnọdụ jọgburu onwe ya nwere ike ịbụ ezigbo mgbasa ozi n'oge a!
Tags: iwu ulo oruụlọ ahịa kọfịngalaba ahapradanjigideSiteọdịnaya saịtịụlọ ahịawebsiteokwu onu